Iindaba zesiXhosa, 25 eyoKwindla 2019 – Zibonele FM | 98.2
Iindaba zesiXhosa, 25 eyoKwindla 2019
Written by Ashia Nkontsa on 25/03/2019
Baphume ngobuninzi abahlali base Mandela Park
Abahlali baseMandela Park eKhayelitsha bamemelela inkxaso ngakwixhoba lodlwengulo eliyintwazana eneminyaka elithoba ubudala. Abahlali bathi kungokunje basenkundleni yamatyala yaseKhayelitsha apho kulindeleke ukuba kuvele indoda eneminyaka engamashumi amane anesine ubudala etyholwa ngokudlwengula le ntwazana. Iingxelo zithi ummangalelwa usiphinda okwesibini esi siganeko kwaye uhlala kwalapho kwisitalato ehlala kuso le ntwazana.
U-Malema ukhokelela uba abantu basuse iANC esihlalweni
Inkokheli yeqela le-Economic Freedom Fighters umnumzana Julius Sello Malema uthi eyona ndlela iyiyo yokuwonga owayesakuba ngunobhala jikelele wephiko lolutsha leANC umnumzana Sindiso Magaqa kukususa i-ANC elulawulweni. Kwiveki ephelileyo usodolophu kamasipala i-Harry Gwala kwakunye nabanye abathathu bebevele enkundleni ngokwayamene nokugqithisw’amafu kukaMagaqa ngomnyaka ka2017. Iphinde yasemehlweni oluntu ingxaki yokubulawa koosopolitiki kwiphondo iKwaZulu Natal…
Isehlo esenzeke eDelft
Inqwanqwa lesipolisa ekuhlaleni eDelft lithi luzakufumana uphululo lomphefumlo usapho lwendoda edutyulwe phambi kosapho lwayo ngomgqibelo kwaye amapolisa azakusoloko ebonakala ngamandla. Luhleli ngoloyiko usapho lwendoda yaseDelft engutata wabantwana abane ethe yadutyulwa lwangcol’ungele. Le ndoda idutyulwe phambi kwabantwana bayo kwindibano yolowabo kusojiwa inyama phambi kosuku lwayo lokuzalwa ngobusuku bangomgqibelo ngentsimbi yeshumi ebusuku. Olu sapho luthi ukususela ngenyanga yoMqungu lufumene izigqogqiso zokuba luzakunqolotywa lubulawe, umntu ngamnye. Elinye lamalungu osapho elingafunanga ukudizwa lithi basengozini ngenxa yokuba omnye wabo akazange avume ukuzibandakanya neqela lemiguvela.
Kulindeleke ubungqina kwisiganeneko seFord KUGA
ulindeleke ukuba anikezele ngobungqina enkundleni ephakamileyo yaseKapa umntu wokuqala owabona isiganeko sokutsha kwesithuthi sohlobo lweFord Kuga eWilderness ngaphandle kwaseGeorge. Inkundla ibambe uviwo lophando malunga nokubhubha kukaReshall Jimmy owatsha kwesi siganeko. Amagqwetha amele inkampani yakwaFord athi akukho bungqina bubonakalisa ukuba esi sithuthi sitshe ngenxa yeengxaki zokwenziwa kwaso.
Bayaqhanqalaza abahlali base Sir Lowry’s
Kuqhuba uqhankqalazo eSir Lowry’s Pass Village cebu kuhle eGordon’s Bay ngaphandle kwasekapa. Isebe lezothutho lephondo leNtshona Koloni lithi abaqhankqalazi bantumeke amatayala bexina zonke iindlela ezisingise kule lali. Ukanti awukaziwa unobangela wolu qhankqalazo okwakalokunje.
bakarhulumente i-Public Servants Association ingqinile ukuba abasebenzi
bakwaSARS bazakubamba uqhankqalazo lukazwelonke ngolwesine. Iimanyano iiNehawu
kwakunye nePSA zigunyazisa ukonyuselwa imivuzo ngomyinge weshumi elinanye
ekhulwini lo gama u-SARS ebeka etafileni umyinge wesithandathu nesixhenxe
ekhulwini. Usekela manejala wePSA umnumzana Tahir Moepa uthi bazame konke
okusemandleni ukuzikhwebula kwisenzo soqhankqalazo kodwa ngenxa yemeko babona
Singcono isimo sikaEskom kunakuqala
Usomlomo wakwaEskom umnumzana Andrew Etzinger uthi kungokunje zonke izinto zimi kakuhle kule nkampani kwaye ukuba ikho ingxaki abahlali bazokwaziswa. Kubonakala ngathi abemi belizwe loMzantsi Afrika bangasinda kucimi-cimi wombane kule veki nanjengoko iimeko zibonakala ngcono kuneveki edlulileyo. Kwiveki edlulileyo eli lizwe belijamelene neeyure zobumnyama nanjengoko u-Eskom ebexakene neengxaki zoomatshini bokuphehla umbane kwaye usoloko egxekwa malunga nokufeda kwakhe nalapho imibutho emininzi imemelela ukuguzulwa kwebhodi yolawulo. AbakwaEskom bathi ukumiliselwa kwesigaba sokuphungula umthwalo embaneni kuncedile ukuzisa uzinzo.